I-china i-oksijini ye-oksijini echithwe kwimitha i-T4042 mveliso kunye nabenzi | Chunye
Isibonisi esikhulu se-1, unxibelelwano oluqhelekileyo lwe-485, kunye ne-alamu ekwi-intanethi nangaphandle kweintanethi, i-98 * 98 * 130 ubukhulu bemitha, i-92.5 * 92.5 ubukhulu bomngxunya, i-3.0 intshi enkulu yesikrini.
Useto olungagqibekanga lwesiNgesi, inkcazo yomsebenzi imfutshane kwaye icacile, ngokuhambelana nemikhwa yokusebenza yabantu, kunye nokubonelela ngokulula kubaqhubi.
Uluhlu lwemilinganiselo 0 ~ 200ug / L; 0 ~ 20mg / L
Iyunithi yokulinganisa ug / L; mg / L
Isigqibo 0.01ug / L; 0.01mg / L
Isixhobo sobunzima 0.6kg
Izixhobo zobukhulu 98 × 98 × 130mm
Imilinganiselo yokufaka imingxunya Ubungakanani: 92.5 * 92.5mm
Egqithileyo Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-Intanethi T6546
Okulandelayo: Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-T6042
Ph woluvo Electrode, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isilumko seChlorophyll, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic,